सरकारले असार मसान्तसम्म ३० हजार कोरोना संक्रमितलाई चाहिने स्वास्थ्य सामग्री जोहो गर्दै « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
सरकारले असार मसान्तसम्म ३० हजार कोरोना संक्रमितलाई चाहिने स्वास्थ्य सामग्री जोहो गर्दै
२०७७, ५ असार शुक्रबार १०:४० मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । कोभिड–१९ बाट संक्रमित संख्या तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा सरकारले असार मसान्तसम्म ३० हजार संक्रमितलाई चाहिने स्वास्थ्य सामग्री जोहो गरेको छ । सरकारले असार मसान्तभित्र संक्रमित कति पुग्छन् भनेर औपचारिक रूपमा भने सार्वजनिक गरेको छैन ।
फागुन मसान्तसम्म नेपालमा एक जना मात्र संक्रमित थिए । संक्रमितको संख्या चैत मसान्तसम्म १२, वैशाख मसान्तसम्म २ सय १९ र जेठ मसान्तसम्म ५ हजार ७ सय ६० पुगेको थियो । असारमा चार दिन बित्दा संक्रमित संख्या ७ हजार ८ सय ४८ पुगेको छ । संक्रमण अहिलेकै गतिले बढे असार मसान्तसम्म संक्रमितको संख्या ४५ हजारसम्म पुग्ने विज्ञहरूले दाबी गरेका छन् ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार पीसीआर परीक्षणको दायरा बढेसँगै मुलुकमा कोरोना संक्रमणको दर तीव्र गतिले बढिरहेको हो । जनस्वास्थ्यविद् डा. राजेन्द्र बीसीले भने, ‘मंगलबार संक्रमण दर साढे ७ प्रतिशतभन्दा बढी थियो भने बुधबार बढेर ९.७ प्रतिशत पुग्यो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले भने ३० हजारभन्दा बढी कोरोना केस पुग्ने अनुमान गरेर सामग्रीको तयारी गरिराखेको जानकारी दिए ।
संक्रमणबाट २२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । पछिल्लो समय ८० प्रतिशतभन्दा बढी भारतबाट स्वदेश फर्कने नेपालीमा संक्रमण देखिएको छ । संक्रमण समुदायमा भने प्रवेश गरिनसकेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।
जनस्वास्थ्यविद् डा. बीसीले यही गतिमा संक्रमण बढ्दै गए असार १४ सम्म संक्रमितको संख्या ११ हजार ५ सयभन्दा बढी पुग्ने बताए । सरकारले बढाउने पीसीआर परीक्षणको दायरामा संक्रमण बढ्ने–नबढ्ने निर्भर रहने पनि उनको भनाइ छ । असार १५ पछि सरकारले दिनमा १० हजारभन्दा बढी नमुनाको पीसीआर परीक्षण गर्ने बताएको छ ।
जेठ ४ मा १ हजार ४ सय ६९ नमुनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको थियो । त्यस दिन १४ वटा नमुनामा मात्र कोरोना पोजिटिभ पाइएको थियो । त्यस दिन संक्रमणको दर १ प्रतिशत मात्रै थियो । ठीक एक महिनापछि मंगलबार ५ हजार ५० नमुनाको परीक्षण गर्दा ३ सय ८० नमुनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । यस दिन संक्रमण दर साढे ७ प्रतिशत थियो ।
कोरोना संक्रमणको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा हरेक १५ दिनमा संक्रमणको दर दोब्बर भएको देखिन्छ । गत जेठ १ सम्म २२ हजार ६ सय ६४ नमुनाको पीसीआर गरिएकामा २ सय ४९ जनामा कोरोना पोजिटिभ पाइएको र संक्रमण दर १.१ प्रतिशत देखिएको थियो । जेठ १७ सम्म ६६ हजार ७ सय २९ नमुनाको पीसीआर गरियो । १ हजार ४ सय १ नमुनामा पोजिटिभ पुष्टि हुँदा संक्रमण दर २.१ प्रतिशत पुग्यो । जेठ ३२ को तथ्यांकअनुसार १ लाख ३३ हजार ३ सय ७७ नमुनाको पीसीआर परीक्षण हुँदा ५ हजार ७ सय ६० जनामा संक्रमण पुष्टि र संक्रमण दर ४.३ प्रतिशत पुगेको थियो । कन्तिपुरदैनिकबाट साभार
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड—१९ विरुद्धको पहिलो चरणमा खोप लगाउने व्यक्तिहरुको
ह्याम्समा प्रा.डा. भगवान कोइरालाको पत्थरीको शल्यक्रिया
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । वरिष्ठ मुटु सर्जन एवं नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर भगवान
देशभर थपिए ३०२ जना कोरोना संक्रमित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । पछिल्लो चौविस घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा १ सय १२ सहित देशभर थप
कोभिशील्डले कसरी काम गर्छ?
जनस्वास्थ्य सरोकार । संसारकै सबैभन्दा ठूलो खोप अभियान सुरु गरेको एक हप्ताभन्दा कम समयभित्रै भारतले
शनिबारबाट ‘कोभिसिल्ड’ खोप सातै प्रदेशमा
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । भारत सरकारको अनुदानमा आएको कोरोनाबिरुद्धको खोप ‘कोभिसिल्ड’ शनिबारबाट सातै प्रदेशमा वितरण